Iyo iPhone X yanga yakarongerwa kurova musika mu2018 | IPhone nhau
Sezvo vhiki dzinopfuura, Apple inopa ruzivo nezve iyo nyowani iPhone X mune dzakasiyana kubvunzurudzwa idzo dzimwe nhengo dzeboka rekugadzira kana vakuru vekambani vari kupa. Sekureva kwaDan Riccio, mainjiniya weApple, mune imwe hurukuro yakaburitswa paMashable, Apple yaida kuvhura iyo iPhone X gore rinouya, asi aifanirwa kugadzira muchina kusvika pakukwirira kuti agone kuutangisa gore rapfuura kupfuura zvaitarisirwa. Zvichida kuti vamwe venyu muri kuverenga chinyorwa ichi pane yako nyowani iPhone X, nekuti nhasi izuva iro Apple rinoisa zviri pamutemo kutengesa iyo iPhone iyo inorangarira yegumi yegumi kuburitswa kweiyo yekutanga iPhone.
Riccio anodaro ivo vaifanira kushanda zvakanyanya uye ivo vaida tarenda rese, chivindi uye kutsunga yeiyo yose iPhone X dhizaini timu. Apple mainjiniya mainjiniya akabvuma kuti kukurumidza shanduko neyemucheto-kune-kumucheto kuratidza kwakasiya nguva shoma yezvimwe kana dhizaini ikasashanda sekufunga. Huya, Apple yakaridza kadhi rimwe chete.
Izvo zvese zvakatanga riini iyo kambani yakafunga kuita Face ID panzvimbo yeTouch ID pane iyo iPhone, ichirasa huwandu hwakawanda hwerunyerekupe rwaiti Apple yaive nematambudziko pakubatanidza iyo ID ID pasi pechidzitiro, nekuti hapana kana nguva iyo kambani yaida kuisanganisa munzvimbo iyoyo, sezvo yaive iyo ID ID iyo yaizo ndinofanira kuita basa rose. Apple haina kutambisa nguva kuyedza kufunga kuti ingangoita chinzvimbo chakadii cheTouch ID, pazasi pechiratidziro sezvakakurudzirwa nemadhizaini akaburitswa kana kuseri kwechigadzirwa mukambani yekambani.
Sarudzo yekumisikidza neuro-engineered processor, iyo A11 Bionic, yakadzokera ku2014, kunyange hazvo kambani iyi yakanga isingazive panguva iyoyo kuti vaigona kuishandisa sei kuti vawane zvakawanda kubva mairi. Nezve dhizaini, Apple yakavhara dhizaini yeiyo X X munaNovember wegore rapfuura, dhizaini iyo Phil Schiller anoti inofemerwa neyekutanga-chizvarwa iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo iPhone X yanga yakarongerwa kurova musika mu2018
»Zvichida kuti vamwe venyu muri kuverenga ichi chinyorwa pane yenyu nyowani iPhone X»
Hehehe (ini handisi kuzokuvhara iwe!)
Nakidzwa nayo. Ini ndaiziva kuti mumwe munhu angandiitira komendi nekuda kwekufungidzira kwekuiburitsa uye ini ndaona kuti ndiwe. Haikona kunge iri imwe.
Utsi nenhema. Apple yakanga isina kunyarara kupfuura kuivhura gore rapfuura nekuti dhizaini yeiyo iPhone 8 yaive yechinyakare nemakwikwi akamhanyisa mafuremu uye Apple, mambokadzi wedhizaini, akange asiya achishungurudzika. Vakange vadya mbiriso mukugadzirwa uko kwagara kuri kwakanaka.
Uye ipapo muchina waifanira kumhanyiswa nekuti iyo iPhone 8 Plus haina kumira zvachose kupikisana nemakwikwi.
Uye izvo zvaive zvinouraya pakutengesa uye Apple yakapomedzerwa nekuenderera kwenguva refu.
Zvizere bvumirana. Iyo iPhone 8 Plus yakanga isina musika kana pfungwa yekudzokorora iyo yakafanana modhi yegore rechina.